तिहारमा पनि रोकिएन भारत पस्नेहरूको लर्को, भन्छन्– ‘अहिले नै नगए साहुले कामबाट निकाल्छन्’
रोजगारीका लागि भारतको दिल्लीतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका अछाम कमल बजारका गणेश कुँवर गत वर्षको यो बेला आफ्नै घरमा तिहार मनाइरहेका थिए । तर यस वर्ष भने तिहारको मुखमै उनी रोजगारीका लागी भारत जाँदै छन् ।
नाकाबाट भारत पस्नेहरूको भीडमा निकै उदास देखिरहेका उनलाई मैले सोधें– तिहार आयो त ? ‘सर तिहार त आउँछ जान्छ के गर्नु हाम्रो बाध्यता हामीसँगै छ,’ उनले जवाफ फर्काए ।
‘अब त तिहार आइसक्यो त मनाएर गएको भए पनि हुन्थ्यो नि ? मैले यति भनी नसक्दै,’ उनले जवाफ फर्काइहाले, ‘सर तिहार मनाउन त कसलाई रहर हुँदैन र मेरो पनि घरमा सानी दुई बहिनी छन् । उनीहरूको हात खाली छोडेर यसरी जानु पर्दा मन भतभती पोलेको छ । के गर्नु जानै पर्ने बाध्यता छ ।’
‘आमा सारै बिरामी हुनुहुन्छ । ३ वर्ष भयो बिरामी भएको, अहिलेसम्म रोग नै पत्ता लागेको छैन । यहाँका सबै अस्पताल लगिसकें तर कहीँ गएर ठीक भएन त्यसैले आमालाई लिएर भारत जाँदैछु । केही काम गरेर उतै आमाको उपचार गर्छु । आमाको औषधि पनि सकिएको छ, उहाँलाई झन्झन् गाह्रो हुन थालेपछि मुखमै आएको तिहार छाडेर भारत जाँदैछु’, उनले भने।
कोरोना त्रासकै बीच गाउँ शहरमा तिहारको चहलपहल शुरू भइसक्दा पनि भारत जानेहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन ।
दशैँको समयमा भारत जानेहरूको लर्कोले भरिभराउ त्रिनगर नाकामा अहिले तिहारको समयमा पनि त्यस्तै लर्को छ ।
अहिले नगए साहुले कामबाट निकाल्छन् !
बुधवार पनि त्रिनगर नाकामा भारत जानेहरूको चाप थियो । सुरक्षाकर्मीहरूलाई भीड व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । भारत जानेहरूको लाइनमा सामाजिक दुरीको त के कुरा कसैले त मास्कको प्रयोग समेत गरेका थिएनन्।
रोजगारीका लागी भारतमै आश्रित सुदूरपश्चिमेलीहरूलाई तिहारको समयमा भारत पस्नु नियति हो । ठेलमठेल गरी लाइनमा बसेका डोटीका ४५ वर्षीय पदम सुनार भन्छन्, ‘तिहारमा यसरी जानु पर्दा साह्रै न्यास्रो लागिरहेको छ । भारतमै मजदुरी गर्न थालेको २८ वर्ष हुन थाल्यो । अझै कति गर्नु छ, हेरौं ।’
‘घर आएको पाँच महिना पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘जेठ महिनामा कोरोनाको डरले घर आएको हुँ अहिले फेरि डरै–डरले गइरहेको छु ।’
‘भारतमा कोरोना बढ्न थालेपछि दुई महिनाको तलब पनि नबुझेरै घर आएको थिएँ । अहिले साहुले बोलाएका छन् । एक हप्तामा नपुग्यो भने अर्कालाई काममा राख्छु भनेका छन् । मेरो त पाँच वर्ष भयो त्यहाँ काम गर्न थालेको बाँकी तलब पनि बुझ्न बाँकी छ त्यसैले तिहार नमनाई जान लागेको हुँ’, उनले भने ।
‘तिहार अब मीठो मसिनो खाएर उतै मनाउनुपर्ला, दिदीबहिनीको हातको माला लगाउन नपाउँदा नरमाइलो लागिरहेको छ,’ यति भन्दै गर्दा उनको जाने पालो आयो र हात हल्लाउँदै भारततिर लागे ।
उनको जस्तै समस्या कञ्चनपुरको पुनर्वासका सुवास सिंहको पनि छ । विगत १० वर्षदेखि भारतमै रोजगारी गरिरहेका उनलाई पनि तत्काल काममा फर्किनैपर्ने बाध्यता छ । ‘भारतबाट साहुले तुरुन्त कामका आउनु भनेका छन्, त्यसैले जाँदै छु,’ उनले भने, ‘अर्काको नुन खाएपछि काम त गर्नै पर्‍यो । घर आउने बेला कोरोनाले गर्दा सबै काम बन्द भएका थिए । अहिले फेरि काम शुरू भए, त्यसैले जाँदैछु ।’
कोही तिहार नहुने भएर त कोही उतै मनाउने गरी
‘नाकामै भेटिएका कैलाली मोहन्यालका हर्क बुढा भने यसपालि तिहार नहुने भएर भारत गइरहेका थिए । ‘एक महिनाअघि मात्रै आफन्त बित्नुभयो, तिहार नहुने भयो त्यसैले म भारत जाँदैछु,’ उनले भने ।
‘अब यसपालि तिहार पनि नहुने घरमा बसेर पनि के गर्नु, पछि कमाउन जानु पर्ने भारत नै हो । त्यसैले अहिले नै कमाउन भारत जाँदैछु’, उनले थपे, ‘भारत जाँदा आफूलाई मात्र समस्या हो तर नगए त घरमा खानलाउनै समस्या पर्छ । त्यसैले पनि जानैपर्ने बाध्यता छ ।’
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ९ जरैका २३ वर्षीय वीरेन्द्र भट्ट भने यसपालिको तिहार भारतमै मनाउने गरी जाँदै थिए । ‘बेरोजगार भएर कति बस्नु,’ उनले भने, ‘पैसा कमाउन केही न केही गर्नै पर्छ । आजसम्म आफ्नै ठाउँमा केही अवसर मिलिहाल्ला भनेर बसेको थिएँ । अब त जानैपर्ने भयो,’ उनले थपे, ‘साथीले काम खोजी सकेको छ भारतमा गएर सिधै काम गर्ने हो । दिदी भिनाजु पनि उतै हुनुहुन्छ, तिहार भारतमै मनाउँछु,’ उनले भने ।
तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी भारत गए
त्रिनगर नाकामा बिहानै बाट भारत जानेहरूको चहल–पहल भइरहन्छ । विगतका वर्षमा सीमानाका हुँदै चाडपर्व मनाउनेहरूको यस्तै घुइँचो हुने गरेको थियो तर यस वर्ष भने भारत जानेहरूको घुइँचो नाकामा छ । त्रिनगर नाका हुँदै दैनिक एक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नागरिकहरू भारत गइरहेका छन् ।
दशैं र तिहारको यो अवधिमा मात्रै त्रिनगर नाका हुँदै १७ हजारभन्दा बढी नेपाली भारत गइसकेका छन् । त्रिनगर नाकाका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक भूपाल थापाले भने, ‘भदौ १२ गतेदेखि कात्तिक २४ गतेसम्म ४८ हजार ५ सय ४२ जना यो नाका हुँदै भारत गएका छन् । दैनिक १ हजार बढी नै भारत गइरहेका छन्, सबै जोड्दा भदौयता ५० हजारभन्दा बढी नागरिकहरू भारत गइसकेका छन् ।’